ကျနော်တို့ဆွေးနွေးမှုများသို့ဝေးလွန်းရမတိုင်မီ,ငါသည်သင်တို့ကိုဒီတစ်ခု 18+စီမံကိန်းကိုကြောင်းရှေ့ဆက်အချိန်သိစေသင့်ပါတယ်:သင်အသက်အရွယ်အထက်မဟုတ်ခဲ့လျှင် 18,ချက်ချင်းထားခဲ့ပါကျေးဇူးပြုပြီး! သင်တို့ရှိသမျှကိုအရေးယူဆင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်လျှင်ဤအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းဂိမ်းများကိုတင်ပြစေခြင်းငှါ,,သင်ရိုးရိုးပဲသင်တို့အပေါ်မှာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းဖြင့်န့်အသတ်လက်လှမ်းရလိမ့်မယ် 18 အသက်အနှစ်. ကျန်ရှိသောမည်သူမဆို:သင်တို့သည်ဤအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းဂိမ်းအလွန်အမင်းစွဲလမ်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်၏ကြက်သင်ပြုလောက်ပါတယ်ကြောင်းချွတ်လူရှုပ်အပေါင်းတို့မှအလွန်အလွန်အနာဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်ရပါမည်., သင်ကပရောပရည်လုပ်စက်တွေနဲ့ပျော်စရာရှိခြင်းအချို့ပူမိန်းကလေးများအပေါ်ဝမျးမွောကျပြီးနောက်ကခံစားရပုံကိုအံ့သြဖွယ်သိကြ၏။ သင်အကြိုက်ဆုံးညစ်ညမ်းကြယ်နဲ့မော်ဒယ်တွေကိုသင်ကြိုက်နိုင်သလိုဘဲမြင်နိုင်တယ်။အကြောင်းကအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်တဲ့လိင်ဂိမ်းမှာသင်ဟာထိန်းချုပ်မှုရှိလို့ပါ။
သင်ဝင်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မတူဘူးဆိုရင်စင်ကြယ်စွာပြေးပါ။ ကျနော်တို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာနှင့်ပတ်သက်.နှင့်သင်ဖြစ်နိုင်ပြောပြနိုင်အဖြစ်တို့တွင်ဖြစ်မကြောက်ပါဘူး,ငါတို့သည်နောက်လာကြတယ်ဆွဲထုတ်. ဒါဟာရှည်လျားလူသား၏နှစ်ဦးအကြိုက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုများလက်ထပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့ပြီ:ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း. ကစားနည်းချစ်ကြောင်းပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးများနှင့်အတူတစ်ဦးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းဗီဒီယိုဂိမ်း. ပင်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်! ပံုစံေတြကေတာ့ရင္သားအရြယ္အစား၊အရြယ္အစား၊အရြယ္အစား၊စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင်သည်သင်၏အိပ်မက်များ၏မိန်းကလေးနှင့်အတူအွန်လိုင်းကစားနိုင်ပါတယ်., အံ့ဩမိတာကဘယ်ဖန်တီးသူမှအရင်ကဒီညစ်ညမ်းတဲ့အယူအဆတွေမှာအချိန်အများကြီးကုန်ဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး၊ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတယ်နော်။ ဒါကြောင့်,သင်မသိသောမျက်နှာသို့ခြေလှမ်းယူအပြည့်အဝစူးစမ်းချင်ပါနဲ့,အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်လိင်ဂိမ်းအတွင်း၌သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းခေါ်ဆောင်သွားပျော်မွေ့? ထိုအခါရဲ့စတင်ကြကုန်အံ့!
အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်တဲ့လိင်ဂိမ်းတွေစကတည်းကအပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခြင်းဟာအကန့်အသတ်မရှိရှေ့ဆက်ဖို့အကောင်းဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ လူအတော်များများဟာယခုကဂိမ်းကစားမှကြွလာသောအခါသဘောပေါက်ပါပြီ,အဖုံးမကြာခဏနောက်ဆုံးဂိမ်းထက်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့၏ငရဲရှိနိုင်ပါသည်. မကြာသေးမီကဥပမာဆိုက်ဘာတင်ဒါ 2077 နှင့်တော်တော်များများမည်သည့်အာကာသပုံစံဂိမ်းပါဝင်သည်–သူတို့အမြဲမျှော်လင့်ချက်များ၏တိုတောင်းခြင်းနှင့်,ပိုပြီးအရေးကြီးတာက,ကတိတော်များ. အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်တဲ့လိင်ဂိမ်းတွေကိုအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးတာရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေပေးတာကိုမကြိုက်ရင်ကိုယ်ဟာစွန့်လွှတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့။
များစွာသောအခြားဂိမ်း၌ရှိသကဲ့သို့,ငါကကြိုက်ထင်ပါ၏ဒါကြောင့်ငါကဒီဗီဒီယိုဂိမ်းအပေါ်ပိုက်ဆံကုန်ရပြီသောဖိအားကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြ. ငါမကြာသေးမီကအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့သည်,ငါသည်ဤသတ္တုတွင်းပဲပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းထွက်တွေ့ရှိ. များစွာသောအခြားအသုံးပြုသူများစိတ်ပျက်စရာဤအမျိုးအစားများကိုကြုံတွေ့နေရကြသည်. လိင်ဂိမ်းအပေါ်ငွေအများကြီးဖြုန်း,သာအချို့လိမ်လည်သူများကိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးမယ့်သဘောပေါက်ဖို့ကကစားနှင့်ပျော်စရာရှိသည်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့. အခြားအဖွဲ့ဝင်များပို.ပို., လိမ်လည်မှုတွေအများကြီးထွက်ရှိပါတယ်,ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းဗီဒီယိုဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဖြစ်ကောင်းစွာမသာ.
သင်လိင်ဂိမ်းဝယ်ယူသောကြောင့်,သင်ကစားသို့သော့ခတ်မခံစားရဘူး,မဟုတ်သလိုသင်မျိုးခဲ့ကြရတယ်သောသဘောအရပါဘူး. ဘရောက်ဇာဝင်းဒိုးကိုပိတ်ပြီးအခြားတစ်ခုခုလုပ်လိုက်ရုံပါ။အန္တရာယ်မရှိ၊ပုပ်သိုးမှုမရှိ။ ဒီချဉ်းကပ်မှုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်သင်ထွက်ရှိအကောင်းဆုံးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းဂိမ်းပေးခြင်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြု:ငါတို့သည်သင်တို့နောက်တဖန်အချိန်နှင့်အချိန်ပြန်လာရန်ဖိအားတစ်ခုကြီးမားငွေပမာဏများ. သင်သည်မကျင့်လျှင်,ထို့နောက်ကျွန်တော်ထွက်ဆုံးရှုံး–ကြောင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းတဲ့. ဒါကြောင့်,တိုတိုပြောရရင်,ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ဂိမ်းပလက်ဖောင်းတာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးအစဉ်အမြဲဖြစ်လိမ့်မည်., ကျနော်တို့ကအမြဲသင်တို့ပတ်လည်ကိုအကောင်းဆုံးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဂိမ်းများကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်သူတို့သည်သင့်မျှော်လင့်ချက်များကိုအောက်တွင်ဆိုရင်,ကျွန်တော်တို့ကိုမြောင်း–ကျနော်တို့ဖြစ်ကောင်းကထိုက်!
ဒီဆိုက်မှာရှိတဲ့အမာခံလိင်ဂိမ်းအစုအဝေးတစ်ခုလုံးဟာဘရောက်ဇာကိုအခြေခံထားတာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ရှိအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တိုက်ရိုက်ကစားလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာရှိသည်အားလုံးအကြောင်းအရာအထီ5 ဖြစ်ပါတယ်။ (ခ)ေနာက္လာမည့္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား(ဂ)ေနာက္လာမည့္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား(ဂ)ေနာက္လာမည့္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား(ဂ)ေနာက္လာမည့္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား။ ဒါကဒီစုဆောင်းမှုကိုလုံးဝပလက်ဖောင်း-အဆင်သင့်ဖြစ်စေတယ်။ အဆိုပါထကြွ5 ဂိမ်းများကိုမည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ သင်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်မလိုပါ,သင်ကစားမီကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်. ကိုယ့်ကစားဝင်တိုက်နှင့်ကစား!
ညစ်ညမ်းဂိမ်း၏ဤမျိုးဆက်သစ်၏အားသာချက်များကိုသာလက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းရရှိနိုင်မှုကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်. သင်သည်လည်းအံ့သြဖွယ်ဂရပ်ဖစ်ရလိမ့်မယ်. ညစ်ညမ်းဂိမ်း၏ဤမျိုးဆက်သစ်၏အစစ်အမှန်မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ရူပဗေဒအင်ဂျင်၏အရည်အသွေးကနေပုံရသည်,မကြောင့်3ထပ်. သရော်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေမှာတောင်ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေ၊ကာတွန်းရုပ်ကလေးအားလုံးဟာဒီထ်5 လှည့်ကွက်တွေကြောင့်ဆိုရင်တကယ်ခံစားရပါတယ်။ အသားစိုင်တွေကအခန်းအောင်းနေပြီးအသားစိုင်တွေအားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေမှာအံသြဖွယ်အစင်းကြောင်းတွေနဲ့ရိုက်နေတယ်။ ထန္တလန္5 ဂိမ္းမ်ားတြင္ပို၍အဆင့္ျမင့္ေသာစိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အရာတစ္ခုလည္းပါဝင္ပါသည္။, ဂိမ်းလွတ်လပ်မှုအတွက်တိုးတက်မှုကိုဖော်ပြထားခြင်းဖို့မ. ရှေ့တော်၌ပြောပါတယ်အဖြစ်,ကိုယ့်ကစားဝင်တိုက်နှင့်ကစား!
ကျွန်မတို့ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့နောက်ထပ်ပြဿနာကအထူးသဖြင့်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်တဲ့လိင်ဂိမ်းနေရာမှာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများစွာကသီးသန့်တုံ့ပြန်တဲ့ဂိမ်းတွေရှိတယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့တကယ်ကတတိယပါတီတွေကနေလိုင်စင်ထုတ်ပေးတာပါ။ စိတ်သင်တို့၏ငြိမ်းချမ်းရေး,အကြှနျုပျကိုဖရန့်ကြကုန်အံ့:အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်လိင်ဂိမ်းမှာကဒီမှာတွေ့မြင်အရာအားလုံးသည် 100%ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းမှသီးသန့်. အကြောင်းမရှိနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်:ဤသူသည်သင်တို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုမတှေ့နိုငျကွောငျးကိုအမှတ်တံဆိပ်အသစ်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဂိမ်းတွေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုဗဟိုချက်ဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကိုပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ကြတယ်၊, ငါသည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ဆင်တူလိင်ဂိမ်းဆိုဒ်များမြင်ကြပြီ,ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးလိင်မြင်ကွင်းများခဲ့ကြ,ဗီဒီယိုကလစ်များ,နှင့်ရုပ်ရှင်များ,ပင်တစ်ခုတည်းစွန့်စားမှုဂိမ်းမဟုတ်. လိင်ဂိမ်းတစ်ခုကိုသင်တလွဲသုံးမိနိုင်မည်လော။
အိုး,ငါလည်းအရွယ်အစားအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောဆိုရန်ဖြစ်နိုင်သည်ပညာရှိရဲ့ထင်(ငါသည်ဤရှောင်ရှားလေ့ရှိပါတယ်,အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေစကားပြောတဲ့အခါ!). ကျနော်တို့လက်ရှိရှိသည် 33 အတွင်းအပြင်အားကစားပြိုင်ပွဲ,တစ်ဦးထပ်မံနှင့်အတူ4ဘလူးတုသ်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်. ဒါဟာသေချာတာတစ်ခုရှိပါတယ်,ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲသော်လည်းချဲ့ထွင်နိုင်,ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်4အချိန်ပြည့်ဖန်တီးသူများငါတို့သည်သင်တို့ကိုလက်လှမ်းပေးနိုငျကွောငျးပိုကောင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်လိင်ဂိမ်းဖန်တီးခြင်း၏အလုပ်နှင့်အတူရတဲ့!
တကယ့်ကိုသင်လိင်ဂိမ်းထဲမှာအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအရေးမပါဘူးနဲ့တူအစဉ်အဆက်ခံစားရပါကအခြေခံအားဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကကစားမယ့်? ကောင်းပြီ၊တုံ့ပြန်တုံ့ပြန်တဲ့လိင်ဂိမ်းတွေကိုဒီမှာခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့ဒဿနကကစားသူအတွက်အဆုံးစွန်သောထိန်းချုပ်နိုင်မှုနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရဲ့အဆင့်တွေကိုပေးဖို့ပါ။သူတို့ဟာရိုက်ချက်တွေကိုတောင်းဆိုပြီးဘာဖြစ်မလဲဆိုတာအတိအကျဆုံးဖြတ်သင့်တယ်။ သင်နှင့်အတူဆော့ကစားသို့မဟုတ်သူ့ကိုယ်သူနှင့်အတူသူမ၏ကစားစောင့်ကြည့်ချင်သောမိန်းကလေးကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သင်ပင်အသစ်ရာထူးကြိုးစားနိုင်,တစ်ဦးလိင်ဗီလာအတွက်လိင်ကစားစရာနှင့်အတူကစား,သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုသုံးပါ! ဤမျှလောက်များစွာသောအင်္ဂါရပ်များကိုရှိပါတယ်!, သငျသညျအခန်းကဏ္ဍကစားသို့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်သည်သင်၏မိန်းကလေးစိတ်ကြိုက်လိုပါက,ဤအရပ်ဌာနပါ!
ကဲဂိမ်းအမျိုးမျိုးမှာထည့်သွင်းမှုအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့ကျန်တာစိတ်ချတာကဒီဝက်ဆိုက်ပေါ်ကညစ်ညမ်းဂိမ်းတိုင်းဟာကိုယ့်စိတ်ကူးအတွက်ဖန်တီးထားတာလို့ပြောမယ်။ ဤသည်လိင်ဂိမ်းသင်ပြုရွေးချယ်သောအရာကိုအပေါ်အခြေခံပြီးအလိုလိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လိမ့်မည်. အကြိမ်ပေါင်းများစွာဤဘာသာစကားကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပါသည်(အစားစက်ဟုဆို),ဒါပေမယ့်လည်းအမျိုးမျိုးသောရှာပုံတော်လိုင်းများအတွက်မျိုးစုံရွေးချယ်မှုများတွေ့ပါလိမ့်မယ်,ရန်သူများကိုနှမြောဖို့စွမ်းရည်,နှင့်ခေါ်ဆောင်သွားရွေးချယ်မှုများ၏ပိတ်ပွဲသင်တို့ရှိသမျှသည်ကောင်းစွာမလုပ်ဆောင်ဘူးဆိုရင်! သင့်ရဲ့ခေါ်ဆောင်သွားစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းခဲ့လျှင်သင်ပင်ဆုလာဘ်ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်., ဒီနေရာမှာမှန်ကန်တဲ့ဟန်ချက်ညီမှုကိုတကယ်လှုပ်ခတ်စေခဲ့တယ်လို့ထင်ပြီးနောက်ထပ်ဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ရဲ့လိင်ဂိမ်းအများစုဟာကြွက်တစ်ကောင်နဲ့ပဲကစားနိုင်ကြတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့မှအခမဲ့လက်ပေးသည်,ကောင်းစွာ,သင်သိလား. အလုပ် ငါအကြောင်းပြောနေတာပေါ့ဘာကိုမသိကြ? ကောင်းစွာ,အခမဲ့လက်သင်တို့သည်ငါတို့၏လိင်ဂိမ်းကစားနေစဉ်သင်သည်သင်၏ကြက်လေဖြတ်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါသည်. အဲဒီမှာ–ငါကပြောပါတယ်–ယခုပျော်ရွှင်?!
တွဲပြီး4လက်ရှိတွင်စမ်းသပ်ခံရကြောင်းလိင်ဂိမ်း,ကျနော်တို့လာမယ့်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့ကျော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထည့်သွင်းချင်သောအင်္ဂါရပ်များကိုတွေအများကြီးတစ်ငရဲများ. အဓိကအချက်ကဂိမ်းတွေကိုမွမ်းမံနိုင်စွမ်းပါ။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုကိရိယာတွေပေးပြီးတော့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်နိုင်အောင်ပေါ့။ ဒါကမိုက်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမဲ့ညစ်ညမ်းဂိမ်းစွန့်စားမှုအတွက်ရပ်ရွာအသိုင်းအဝန်းထဲပါဝင်တာကအကောင်းဆုံးရှေ့ဆက်လှမ်းမှုလို့တကယ်ယုံတယ်။ တွစ်တာ:, ကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်ကူးတွေကိုခိုးယူမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခြေခံကစားပွဲရဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲမှုကိုခိုင်လုံဖို့ပုံစံပြောင်းရေးနယ်ပယ်မှာတစ်ခုခုလူကြိုက်များလာမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ခေါင်းစဉ်ကိုပြန်လည်ဖာထေးမယ်လို့ရှင်တို့ပိုယုံတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးသဘောထားကွဲလွဲဆာဗာအပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်းအခြားအစီအစဉ်များ(ယခုမည်သည့်နေ့ရက်ကိုအွန်လိုင်းဖြစ်သင့်)နှင့်အပြည့်အဝအခမဲ့ဒီညစ်ညမ်းဗီဒီယိုပြွန်,သင်ရိုက်ချက်မခေါ်ပါစေသောသူအချို့အပိုအထူးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဗီဒီယိုများနှင့်အတူ–ချိုမြိန်!
ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများ–ဖြစ်ဖို့ကဘာလဲ? ဒီမှာကမ်းလှမ်းချက်အနည်းငယ်ခုခံတွန်းလှန်နိုင်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်,ဒါကြောင့်ညာဘက်ရဲ့အဘယ်အရာကိုပြုပါနှင့်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီး. လိင်ဂိမ်းတွေအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်တဲ့စကြာဝဠာထဲသင့်ကိုမြင်ဖို့ကျွန်မမျှော်လင့်နေပါတယ်။နောက်အဆင့်ပရိုဂျက်တာကစားခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်အတွက်အင်တာနက်ကတစ်ခုတည်းသောစစ်မှန်တဲ့အရင်းအမြစ်ပါ။